vachikuya michina uye zvimwe zvikamu fekitori, Vatengesi | China kukuya michina uye isina chikamu chikamu Vagadziri
Iyo mbishi yezvinhu yakatwasuka chigayo chigayo chinotenderera chakagadzirirwa ne4 kukuya rollers.
JGM2-113 marasha chigayo chiri chepakati-kumhanya chinotenderera chigayo. Chikamu chayo chekukuya chinoumbwa neyeyekutenderera yekugaya mhete uye matatu akagadzika uye anozvitenderera ega kukuya ma roller anotenderera pamwe nekugaya mhete.
Cement yakatwasuka chigayo inoshandiswa kukuya simende mbishi zvinhu. Yayo inoshanda musimboti ndeiyi: mbishi zvinhu zvinopinda zvinoyerera pombi kuburikidza nematatu-nzira mhepo yekuvhara vharuvhu, uye zvinoyerera pombi inopinda mukati mehuyo kuburikidza nerutivi rwekuparadzanisa.
JLMS chinotenderera chigayo chinoshandiswa kwekutanga-kukuya kwesamende kinki.